गर्मीको आगमनको साथ, पिकनिक्सको लागि यो समय छ, जहाँ मुख्य डिश एक शशि केब्याब हो। निस्सन्देह, यो डिश गर्म, रसदार, आकस्मिक मासु (तरल, पोर्क, चिकन) संग सम्बन्धित छ। कोहीले स्टिकको रूपमा बारबेक माछा बनाउँछ वा पूर्ण स्वरहरूमा पकाउनुहोस्। तर एक खुल्ला आगोमा पकाउन सक्ने उत्पादनको विविध प्रकार धेरै व्यापक छ। Skewers, eggplants, घंटी काली मिर्च, टमाटर र अन्य सब्जिहरु मा प्रतियोगी बनाउन को लागि यो धेरै स्वादिष्ट हुनेछ। यो बार्बेक्यू पेटको लागि सजिलो छैन, सजिलो हुनेछ, तर एकै समयमा संतोषजनक। यस लेखमा हामी कसरी स्कुटरहरूमा च्याम्पियनहरू तयार गर्न छलफल गर्नेछौं। तल हामी विभिन्न व्यञ्जनहरू वर्णन गर्दछौं, जस्तै मशरूम बनाउने र उनीहरूको सोजी।
मेयोनेज मा skewers मा Champignons
नुस्खा5देखि6सर्भरको लागि हो। हामी 700 ग्राम ठूला मशरूम, मेयनेज को दुई सौ ग्राम, नमक र जमीन कालो मिर्चको आवश्यकता पर्दछ। बन्द टोपको साथ मशरूम युवा, माध्यमिक आकार लिने यो वांछनीय छ। राम्रो तरिकाले तिनीहरूलाई धुलाई, तिनीहरूलाई सफा गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई एक अलग कटोरामा राख्नुहोस्। त्यहाँ हामी नमक, काली मिर्च, मसाले स्वाद गर्न, मेयोनेज जोड्दछ। यो धेरै राम्रो हो कि राम्रो छैन - एक तीस प्रतिशत, तरल स्थिरता हुनेछ। कम्तिमा चार घण्टाको लागि खारेज गर्न छोड्नुहोस्। त्यस पछि तपाईं कुखुरा मा मशरूम तलना गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा यो सुनिश्चित गर्न को लागि कि गर्मी मजबूत छैन, अन्यथा मशरूम जलाएंगे र फ्राइड नहीं हुनेछ। सस संग सेवा गर्नुहोस्।
चटनी "लसुन" को लागि नुस्खा
हामी मोटो मेयोनेज, अजमोद, डिल, तातो पानीको काली मिर्च र लसुन को दुई वा तीन लौरो लिन्छौँ। ग्रीस पतला कटाई हुन्छन्, लसुनको लहसुन फ्याक्किन्छ र बाँकी अवयवहरूसँग मिलाइन्छ। भयो!
हामीलाई अतिरिक्त पाँच कुञ्जी जैतूनको तेल चाहिन्छ, बेलबारीको सिरका दुई चम्मच , दाईको आधा चम्मच, लसुनको तीन लौरो, लसुन, आधा चम्मचको नुन र दुई चम्मचका चम्मचको मासुको खाँचो पर्छ। सबै घटकहरू वैकल्पिक रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्, जबकि whisk सँग तिनीहरूलाई दुई देखि तीन मिनेटको लागि हल्लाउँदै। मशरूमको लागि चट्टान तयार छ!
खेलकुद प्रतियोगितामा मसालेदार जडीबुटीहरूसँग पकाउनुहोस्
एक किलोग्राम ठूलो च्याम्पियन्स लिनुहोस्, सिलिल्रो, तुलसी, डिल, थिम, गुलाबी को एक सानो समूह। साथै हामी केही ठूला टमाटरहरू, सब्जीको तेलको पचास ग्राम, लसुनको चार लौरो, सिरकाको एक चम्मच, शुद्ध पानीको पचास ग्राम, स्वादको स्वाद। राम्रो तरिकाले मशरूम कुल्ला र एक टूथपे संग धेरै ठाउँमा तिनीहरूलाई छेउ। च्याम्पियनसिपहरूमा पतले कटा टमाटर, लसुन र जडीबुटीहरू थप्नुहोस्। अलग, तेल, पानी र सिरका मिश्रण गर्नुहोस्। परिणामस्वरूप मिश्रण मशरूममा थपिएको छ। ठिम, काली मिर्च र फ्रिजमा दुई घण्टाको लागि अन्न छोड्नुहोस्, आवधिक रूपमा मिश्रण। हामी कोइलाहरू दसौं पन्द्रह मिनेटको लागि पकाउँछौं।
च्याम्पियनसिप एक स्वरमा "आक्रमण"
यस विधि मा, मशरूम को अतिरिक्त, सब्जियां पनि शामिल हो, जो पाक पछि सलाद या नाश्ता को रूप मा सेवा गर्न सकिन्छ। हामी 700 ग्राम मशरूम, मध्यम आकारको टमाटरको 300 ग्राम, मीठो मिर्चको दुई टुक्रा, जुचिन, बैग्नर र प्याज। साथै हामीले हामीलाई एक नींबू, जैतून का तेल र नुन, काली मिर्चको खाँचो पर्छ। Zucchini र बैजनीहरू सर्कलहरूमा काटिएका छन्, काली मिर्च सफा गरिन्छ र प्यालाहरू, प्याज-पङ्क्तिहरूमा काटिन्छ। सब्जियों र मशरूम एक कटोरा, नमक, काली मिर्च मा राख्छन्, नींबूको रस र जैतून को तेल जोड्नुहोस्। हलचल र कम्तिमा एक घण्टाको लागि खारेज गर्न छोड्नुहोस्। च्याम्पियनसिपहरूमा अन्य सब्जिहरु संग वैकल्पिक र माध्यमिक गर्मी संग कोल मा तलना।
घरमा चकलेट कसरी गर्ने?
कसरी एक सीजेरियन मशरूम पकाउने: व्यंजनहरू र तस्बिरहरू
Minivans "होन्डा": वर्णन, विशेषताहरु
किन बिल्ली को बच्चा संग एक बिरालो को सपना: तिनीहरूले सपना-पुस्तकहरू भन्न?
होटल Christofinia होटल4* (साइप्रस / Ayia नापा): समीक्षा, वर्णन, संख्या र समीक्षा
क्रय प्रबन्धक के गर्छ?
यस निर्वाह स्तर तल छुटानाम भएपछि पतिले पत्नीलाई दिने पैसा भने: के, कहाँ जाने?